Etu esi egwu egwu Nintendo Super Mario Bros na gam akporo gi | Gam akporosis
Akụkọ a n'izu a na-ekpuchi mgbasa ozi mgbasa ozi, gụnyere oghere mgbasa ozi nke isi telivishọn ụwa ma ọ bụ Google doodles a ma ama, bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ememe nke Ememe ncheta 30 nke Super Mario Bros, egwuregwu ahụ Nintendo kere azụ na 80s na nke ahụ na-aga n'ihu ịbụ nnukwu ọrịre ahịa zuru ụwa ọnụ maka egwuregwu egwuregwu vidiyo dị iche iche nke ụdị Japanese a ma ama.
Na ederede taa, mgbe mkpesa na nkọwa anyị natara na A gam akporo, ndị Tube tube ọwa nke Gam akporosis Mgbe ị nyochachara egwuregwu na-achọ i imitateomi nnukwu Super Mario Bros si Nintendo na ị Anyị chọrọ icheta na ọ nweghị ukara dakọtara version maka gam akporo, taa anyị chọrọ idozi njehie ma ọ bụ ndudue ahụ, na-eso gị niile rom nke egwuregwu mbụ Super Mario World kpamkpam free, yana nkọwa na-enwe ike na-agba ọsọ ya na anyị gam akporo ọnụ ekele ndị kasị mma ems emulator na anyị nwere dị site na Storelọ Ahịa Play n'onwe ya maka njedebe gam akporo anyị.
Super Mario Bros, na-egwu egwuregwu mbụ maka NDS n'efu na gam akporo gị
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ ibudata na Playlọ Ahịa Google, ụlọ ọrụ gọọmentị maka gam akporo, nds nds emulator kacha mma. An emulator na-aza aha Drastic DS emulator na nke nwere nsụgharị abụọ dị, ugwo mbụ nke euro 4,49 na nke ọzọ na ọnọdụ Demo na njedebe egwuregwu nke 30 nkeji na enweghị nhọrọ ịzọpụta ọganihu ozugbo a tọhapụrụ ya emulator na anyị nwere ike nwalee kpamkpam n'efu.
Ozugbo awụnyere ngwa ahụ tupu ịmalite ya maka oge mbụ, anyị ga-eme ya budata na otu uzo a rom ma ọ bụ nkwado ndabere na egwuregwu
Super Mario World na usoro .nds. Otu faịlụ nke ebudatara ozugbo anyị ga-emeghe na Detuo ọdịnaya ya, faịlụ na ndọtị .nds, na nchekwa folda nke anyị gam akporo ọnụ, ma na esịtidem ma ọ bụ mpụga ebe nchekwa nke ọnụ.
Ugbu a, ozugbo e depụtaghachiri faịlụ .nds nke Super Mario World egwuregwu, anyị nwere ike ịgba ọsọ ngwa ngwa ngwa ngwa emulator Drastic Ds ma soro ntuziaka ndị m na-akọwa nzọụkwụ site na vidiyo na nkụnye eji isi mee ma ọ bụ ngosi nke post a. ị pụrụ ịnụ ụtọ na Super Mario Bros egwuregwu ozugbo na ọnụ gam akporo gị.
Dị ka ezi uche dị na ya, Nke a Nintendo DS emulator ga-eji maka ihe ọ bụla dakọtara Nintendo egwuregwu na-ewu ewu Nintendo DS obere njikwa. Iji budata egwuregwu kacha mma maka NDS, naanị ị ga-eme nyocha na San Google.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Super Mario Run » Mee ncheta afọ 30 nke Super Mario Bros site na ịkpọ egwuregwu mbụ maka NDS n'efu na gam akporo gị. Anyị na-egosi gị otu esi enweta ya
Meizu Pro 5 gbagoro Galaxy Note 5 na Geekbench